Wasiir Maareeye: “Ganacsatada ha garab istaagaan dowladda oo ha bixiyaan canshuurta” – Radio Muqdisho
Wasiir Maareeye: “Ganacsatada ha garab istaagaan dowladda oo ha bixiyaan canshuurta”
Ganacsatada Soomaaliyeed ayaa loogu baaqay in ay garab istaagaan Dowladda, isla markaana ay bixiyaan lacagaha canshuurta ah si dowladdu ay ugu guuleysato dib u soo celinta amiga iyo xasilinta dalka.
Wasiirka Warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo ka hadlayay xafladda dib u howlgelinta Warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in ganacsatada looga fadhiyo inay u istaagaan sidii ay u bixin lahaayeen cashuurta, si lacagahaasi loogu adeego bulshada.
“Adduunka ganacsatada waxa ay marwaliba garab istaagaan dowladooda oo ay bixiyaan sanadkii 50%, marka ganacsatada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay bixiyaan canshuurta, si loogu xoojiyo amniga iyo horumarinta dalka” ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta.
Wasiirka oo soo hadal qaaday Warbaahinta sida gaarka ah loo leeyahay ayaa ku baaqay inay u istaagaan sidii looga wada shaqeyn lahaa danta guud ee dalka, isla markaana ay joojiyaan baahinta waxkasta oo wax u dhimaya Qaranimada Soomaaliya.
“Xalay waxaa jirtay in Idaacad la xiray, Milkiilihii Idaacadda waan la xiriiray, qalad ayaa ka dhacay, waxa ay ahayd in looo digo, laakiin waxaan ku dadaaleynaa sidii markale dib hawada loogu soo celin lahaa oo aan si wada jir ah ugu wada shaqeyno danta guud ee dalka” ayuu markale Wasiirka Warfaafinta hadalkiisa ku daray.
Wasiirka Warfaafinta, dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa hambalyo u diray ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, waxaana uu intaa ku daray in shacabka Soomaaliyeed looga fadhiyo in ciidanka ay gacan ku siiyaan gudashada waajibaadka loo idmaday.
“Waxaan jeclahay in aan tixraaco hadalkii Walaalkeey Cabdikariin Xasan Jaamac, in aan hambalyo u diro ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, waayo daruufo adag ayay ku shaqeeyaan, waxaa kaloo la mid ah shaqaalaha Warbaahinta Qaranka iyo Hobollada Waaberi oo har iyo habeen u taagan wacyigelinta bulshada, tan kale waxaan rabaa in aan halkaan ka caddeeyo in ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ay yihiin geesiyaasha dalka” ayuu Wasiir Maareeye hadalkiisa ku soo gabo gabeeyay.
Kooxda Juventus oo Ka Adkaatay Kooxda Empoli
Howlwadeenada Warbaahinta Qaranka oo loogu hambalyeeyay xuska dib u howlgelinta Warbaahinta